Amakhontrakthi Wokuthuthukiswa Kwasekhaya Ukuthengisa Nokuqasha in Assam
I-Assam (, Assamese: [ɔxɔm] (lalela)) yisifundazwe esisenyakatho-mpumalanga yeNdiya, eseningizimu nempumalanga yeHimalaya eduze kwezigodi zeBrahmaputra neBarak River. I-Assam ihlanganisa indawo eyi-78,438 km2 (30,285 sq mi). Umbuso unqunywe yiBhutan ne-Arunachal Pradesh ngasenyakatho; INagaland neManipur empumalanga; IMeghalaya, iTripura, iMizoram neBangladesh eningizimu; kanye neWest Bengal entshonalanga ngeSiliguri Corridor, isiqeshana somhlaba esingamakhilomitha angama-22 (14 mi) ububanzi esixhumanisa izwe nalo lonke elaseNdiya. Futhi kungesinye seziqeshana ezinabantu abaningi kakhulu emhlabeni. Isi-Assamese ulimi olusemthethweni futhi oluvame kakhulu, lulandelwa yi-Bengali, ulimi lwesibili oluvame kakhulu. I-Assam yaziwa ngetiye le-Assam noshuki wase-Assam. Umbuso bekuyindawo yokuqala yokumba uwoyela e-Asia. I-Assam iyikhaya lobhejane baseNdiya abanophondo olulodwa, kanye nenyathi yasendle yamanzi, i-pygmy hog, ingwe nezinhlobo ezahlukahlukene zezinyoni zase-Asiatic, futhi inikezela ngendawo yokugcina yasendle yendlovu yase-Asia. Umnotho wase-Assamese usizwa ukuvakasha kwezilwane zasendle eKaziranga National Park naseManas National Park, okuyizindawo ezingamagugu omhlaba. IDibru-Saikhowa National Park idume ngamahhashi asendle. Amahlathi eSal tree atholakala esifundazweni okuthi, ngenxa yemvula eningi, abonakale eluhlaza unyaka wonke. I-Assam ithola imvula eningi kunezingxenye eziningi zaseNdiya; le mvula yondla uMfula iBrahmaputra, ontela yawo namachibi e-oxbow ahlinzeka lesi sifunda ngemvelo ye-hydro-geomorphic.